Shirka Golaha Wasiirada oo markii u horeysay todobaadkan ka dhacaya meel ka baxsan Muqdisho – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jul 10, 2017
Shirka Golaha Wasiiradda Xukuumadda Somalia ayaa markii ugu horaysay ka dhacaya Magaaladda Kismaayo. Waxaana Shirkan sida ay Xogta ka heshay Hornafrik uu Khamiista soo socota ka qabsoomayaa Kismaayo oo Xarun KMG u ah Maamulka Jubba Land, iyadoona noqonaysa markii ugu horaysay ee Shirka Golaha Wasiiradda lagu qabto meel ka baxsan Muqdisho tan iyo markii ay Dawladda Somalia ka baxday Ku Meel Gaarka.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa la sheegay in Golihiisa Wasiirada uu ku wargeliyay inay isu diyaariyaan safar ay ugu ambabaxayaan magaalada Kismaayo ka hor Khamiista.
Wafdiga Wasiiradda oo intooda badan gaari doona Kismaayo Talaadada ayaa waxaa hogaamin doona Raiisul Wasaare Ku Xigeen, Halka Tiro Wasiiro ah oo uu horkacayo Raiisul Wasaaruhuna ay tagi doonaan Arbacadda, iyadoo magaalada laga dareemayo diyaar garowga soo dhoweynta wafdiga, iyo sugida amniga.
Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa hawlgallo ka bilaabay Xaafadaha Magaaladda Kismaayo. Waxaana la xiray dhamaan Wadooyinka soo gala Madaxtooyadda Kismaayo, iyo Garoonka Diyaaradaha.
Shirarka Golaha Wasiirada ayaa horay uga dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Jowhar, xilligii Ra’iisul Wasaarayaashii hore Cali Maxamed Geeddi iyo Nuur Cadde, xilligaasoo dowladda aheyd mid KMG ah.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa qorsheyneysa inay xarumaha maamul goboleedyada dalka ku qabato shirarka Golaha Wasiirada, si ay uga baxdo xeyndaabka Muqdisho, oo xukuumad walba oo la soo dhiso aysan dhaafin jirin.